Donald Trump oo sheegay in aysan hub danbe siin doonin Kurdiyiinta Siiriya. – Radio Muqdisho
Donald Trump oo sheegay in aysan hub danbe siin doonin Kurdiyiinta Siiriya.
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii shalay u sheegay dhiggiisa dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, in Mareykanka uusan hadda kaddib wax hub ah siin doonin kooxaha Kurdiyiinta Suuriya ee loo yaqaano YPG, ee ka dagaalanta qeybo ka mid ah dalka Turkiga.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiha ayaa warbaahinta u sheegay in go,ankka Trump uu yimid, kadib marki uu khadka telefoonka shalay kula hadlay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Sida laga soo xigtay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga oo u waramay Warbaahinta dowladda, madaxweyne Trump ayaa u sheegay madaxweyne Erdogan, in uu amray in aanan wax hub ah la siin doonin YPG isla markaana ay ku habbooneyd in mar hore lasoo afjaro arrintani.
Turkiga ayaa in mudda ahba ku cadaadinayay Mareykanka inuu joojiyo taageerada uu siiyo garabka hubeysan ee Kurdiyiinta Waqooyiga Suuriya ka dagaalanta.
Go’aanka Madaxweynaha Mareykanka ayaa ah mid ay soo dhaweynayaan madaxda sare ee dowladda Turkiga oo markii hore ka digayay in la hubeeyo maleeshiyaadka ka dagaalama waqooyiga Suuriya.
Duqa Muqdisho oo xariga ka jray dib u dhiska Degmada Boondheere
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo khudbad ka horjeedinaya Golaha Shacabka